Etu esi azuta ahia na Social Media
Tọzdee, Disemba 29, 2009 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Ihe omume Techmakers ọzọ ga-abụ nke pụrụ iche! Ana m ekelekarị maka ohere ikwu okwu na ndị na - eme ya na - enye ndị na - ege ntị ihe dị iche. Ndị na-emepụta nkà na ụzụ bụ ndị ọkachamara na nkà na ụzụ ndị na-edozi ọdịiche dị n’etiti njedebe na njedebe ndị folks. E nwekwara a mma mix nke obere na nnukwu ulo oru na-abịa ihe ndị a.
The ọzọ omume ga-abụ na Tylọ ụlọ ahịa Scotty ogbe ndịda na Tuesday, Jenụwarị 5th na 5:30 PM. Enwere m olileanya na ị nwere ike ịbịa! Anyị etofeela ebe anyị na-ewerezi ụlọ ime ụlọ na Scotty's!
Aga m na-ekwu okwu na na-agbanwe ahịa ahịa. Ndị ahịa na-anabatabeghị teknụzụ na-anọdụ ala n'oche nye ndị nwere ya na ọdịiche ahụ na-eto. Ngalaba ahia ndi mmadu na-achoghi ahia na-enweghi ndi mmadu na-achota na ntaneti na etinye ego ha na nsogbu.
Na esemokwu, ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa nwere ihe ịtụnanya ngwaọrụ na netwọkụ dị na ha n'ịntanetị iji nyere aka kụziere ha banyere mkpebi na mkpebi azụmahịa. Enwere netwọkụ na obodo dị iche iche na ntanetị, isiokwu nchọta ọchụchọ na blọọgụ na-enye ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa ọtụtụ ozi tupu ha na-akpọ ma ọ bụ na-agwa ndị nnọchi anya ahịa gị okwu.
Site na oge olile anya rutere na saịtị gị, na ekwentị, ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ gị, ha na-amakarị ngwaahịa, ọrụ, ike, adịghị ike na azụmahịa gị dum karịa ka ịchọrọ ka ha bụrụ.
N'oge gara aga, onye na-erere gị bụ ụzọ dị n'etiti atụmanya na ire ere. Nke a abụkwaghị eziokwu. Ugbu a ozi a na-enweta n'ihu ọha bụ ihe na-eduzi. N'ihi ya, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ ịnọ mgbe ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ dị oke mkpa na usoro mkpebi, ndị na-ere ahịa ga-adị n'ịntanetị ebe mkpebi ndị ahụ na-eme.
Dpị maka dollar abụghịzi naanị ụzọ isi ere ahịa na-eto eto. Anaghị m emegide ịkpọ oku ọpụpụ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta nsonaazụ ọma maka azụmaahịa gị, ịkwesịrị idozi oku ọpụpụ na ọrụ ịkparịta ụka n'ịntanetị na n'ịntanetị. Iguzozi ihe niile ndị a ga-eme ka ụlọ ọrụ gị nwekwuo nkwupụta, ikike… yana n'ikpeazụ, ntụkwasị obi. Ogologo oge, ị ga-enwe ezigbo pipeline na-ere ahịa.
Nke kachasị mma, enwere ike ịtụ usoro ndị a n'ụzọ ziri ezi. Anyị nwere ike ịlele okporo ụzọ na ntụgharị site na saịtị nyocha, akwụkwọ ndekọ n'ịntanetị, saịtị na-ezo aka na blọọgụ, netwọkụ mmekọrịta dịka LinkedIn na Facebook, yana ndị na-elekọta mmadụ dịka Twitter. Atụmatụ ndị a chọrọ ume yana moment itinye izu ole na ole n'ịntanetị agaghị enyere ụlọ ọrụ gị aka - mana itinye ego n'otu afọ nwere ike ịmalite azụmaahịa gị karịa ka ị chere.
Enwere m olileanya ịhụ gị na ihe omume iji kwurịta atụmatụ na ngwaọrụ azụmaahịa gị nwere ike ịmalite ịmalite ịmalite usoro azụmaahịa ọhụrụ ndị a.
Tags: ahịa ahịaahịa azumndị na-ere ahịaonye na-ere ahiandị ọrụ ntanetị
Ka ọ dịHootsuite, Ndewo Ọzọ Twitterfeed